(1)Wifi Basic Hacking (Myanmar Version) |(2)Windows7မှာ Wifi Hotspot တည်ဆောက်ခြင်း ~ ITmanHOME
22:36 window7, နည်းပညာ No comments
(1)Wifi Basic Hacking (Myanmar Version) |(2)Windows7မှာ Wifi Hotspot တည်ဆောက်ခြင်း
Wifi Basic Hacking (Myanmar Version)
မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ ဒီစာအုပ်ကိုရေးသားသူကတော့ 3ethick0kiddi3 ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဆိုဒ်မှာလည်း သွားပြီးဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ ဘော်ဘော်တို့အနေနဲ့ သူ့ဆိုဒ်ကိုလည်း သွားပြီးအားပေးလိုက်ပါအုံး။ အခုလိုမျိုး ဟက်ကင်းအခြေခံစာအုပ်လေးတွေကို ဘာသာပြန်ပေးပြီး တင်ထားပေးတာ အဆင်ပြေတာပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ အရှုပ်တွေလုပ်ပြီး အလုပ်တွေရှုပ်နေတာနဲ့ စာမရေးနိုင်ပါဘူး(ရေးဖို့စာလည်း လောလောဆယ်ခေါင်းမှာမရှိ :P) ။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Windows7မှာ Wifi Hotspot တည်ဆောက်ခြင်း
Windows7မှာ wifi-hotspot တစ်ခုသတ်မှတ်ရတာလွယ်ကူပါတယ်။ အရင်ဆုံး ကွန်ပျူတာမှာ wireless driver တပ်ဆင်ထားခြင်း ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ Driver ကိုစစ်ဆေးဖို့ရာ My Computer ကို Right-click>Manage ကတစ်ဆင့် Device Manager ကိုသွားပါ။ အဲဒီမှာ Network Adaptor ကို expand လုပ်တဲ့အခါ Broadcom 802.11n Network Adaptor ဆိုတာကိုမြင်ရမှာပါ။ ဒါဟာ Wireless driver ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Driver ရှိတယ်ဆိုရင် Wifi ထောင်လို့ရပါပြီ။
ပြီးရင် Start>Control Panel>Network and Internet>Manage Wireless Networks ကိုသွားပါ။ အဲဒီမှာ Add ကိုနှိပ်ပြီး Create an ad hot Network ကိုရွေးယူပါ။ ပုံမှာကြည့်ပါ။
အဲဒီအဆင့်ပြီးသွားရင် Next ကိုကလစ်ပြီး ဆက်သွားပါ။ နောက်မြင်ရမှာကတော့ Netwok Name, Security Type, Security Key တွေပါပဲ။ Network Name ဆိုတာ ခင်ဗျား Wifi ကို တခြားလူတွေမြင်ရမယ့် name ဖြစ်ပါတယ်. Security Type မှာရွေးစရာ ၃ ခုရှိပါတယ်။ No authentication(Open), WEP, WPA2-Personal ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ No authentication (Open) ကိုပဲရွေးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ WEP တို့ရွေးရင် Security Key တွေထည့်ရမယ်လေ။ တကယ်လို့ ခင်ဗျား Wifi ကို password ခံထားချင်တယ်ဆိုရင် WEP ကိုရွေးထားနိုင်ပါတယ်။
WEP ထက်ပိုပြီး Security မြင့်ချင်ရင် WAP2 ကိုရွေးပါလေ။ WEP နဲ့ protection လုပ်ထားတဲ့ Network ကို Backtrack Linux Live CD နဲ့key တွေကို Crack လုပ်နိုင်ပါတယ်. ဒါပေမယ့် WAP2 ကစက်တိုင်းနဲ့
ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်း သိထားရပါမည်။ ဒီနေရာမှာတော့ Open လုပ်ထားတဲ့အတွက် Data တွေကို share လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ပါ။ ကောင်းပါပြီ။ Next ကိုနှိပ်ပြီး Close ကိုနှိပ်ရင် ရပါပြီ။ Computer ရဲ့ အောက်ခြေ Task bar မှာ Wireless Network Icon ကိုဖွင့်ကြည့်ပါ။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ နာမည်နဲ့ Waiting for users ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ တကယ်လို့ တစ်ဘက်က user တစ်ယောက်က ကျွန်တော့် Wifi ကိုတွေ့ပြီး Connect လုပ်ခဲ့ရင် ကျွန်တော့်ဆီမှာလည်း Connected ဆိုပြီးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်က ပုံကို ကြည့်ပါ။
ဒါတွေလုပ်ပြီးသွားပြီ။ မပြီးသေးဘူး။ Windows7မှာ ဖိုင်တွေကို share လုပ်ဖို့ Start>Control Panel>Network and Internet>Network and Sharing Center ကနေ Change advanced sharing settings ထဲကိုသွားပါ။ ရှင်းသွားအောင် ပုံကိုကြည့်လိုက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရမှာက Home or Work ဒါမှမဟုတ် Public မှာ Network Discovery ကို On ပေးရပါမယ်။ File and printer sharing ကိုလည်း On ပေးရပါမယ်။ Public folder sharing ကိုလည်း On ပေးနိုင်ပါတယ်။ Public folder sharing ကို On လိုက်ရင် တစ်ဘက် ကွန်ပျူတာကနေ ခင်ဗျားကွန်ပျူတာရဲ့ C:\_Users\_Public ဆိုတဲ့ folder ကို access လုပ်နိုင်သွားပါလိမ့်မယ်။ Sharing လုပ်ပေးချင်တယ်ဆိုရင် ON ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ folder ထဲမှာ ခင်ဗျား share ပေးချင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေ ဖိုင်တွေ အစရှိသည်ဖြင့် ထည့်ထားပေးလိုက်ပေါ့။
ဒီ ဖိုလ်ဒါကို ဟိုဘက်ကွန်ပျူတာကနေ ဘယ်လိုaccess လုပ်မလဲ။ ကွန်ပျူတာရဲ့ Computer name ကိုသိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ User Account Name နဲ့မမှားဖို့ သတိပြုစေချင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ name ကိုသိရဖို့ Win+R ကိုနှိပ်ပြီး cmd ဟုရိုက်ထည့်ပါ။ Command prompt ပေါ်လာရင် hostname ဟုရိုက်ထည့်ပါ။ ဒါဆိုရင် သိရပါပြီ။
ကွန်ပျူတာ hostname ကတော့ performance ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဟိုဘက်ကွန်ပျူတာကနေ ကျွန်တော့် PC ကို access လုပ်မယ်ဆိုရင် အခုလို Run box (Win+R) မှာ \_\_Performance ဟုရိုက်ထည့်ပြီး ၀င်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ hostname ကို ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းထားလို့လည်းရပါတယ်. တကယ်လို့ ပြောင်းချင်ရင်တော့ My Computer ကို Right-click>Properties ခေါ်ပါ။ အဲဒီမှာ Computer name, domain and workgroup settings အောက်ကဘေးမှာ Change settings ကိုကလစ်ပါ။ ပြီးရင် Computer name(Tab) အောက်က Change ကိုနှိပ်ပြီး ပြောင်းနိုင်ပါပြီ။ ကွန်ပျူတာကို Restart လုပ်ဖို့တောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်။ Restart လုပ်ပြီးရင်တော့ ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။